फेरि दोहोरियो रुकम घ’टना ! क्षत्री को छोरी संग विक को प्रेम; प्रेमिकाको भयो यसरी निधन (भिडियो हेर्नुस्) – Namaste Dainik
September 2, 2020 NamastedainikLeaveaComment on फेरि दोहोरियो रुकम घ’टना ! क्षत्री को छोरी संग विक को प्रेम; प्रेमिकाको भयो यसरी निधन (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौ । कथित उपल्लो जात भनिएकी एक युवतीसंग प्रेम गरेको अभियोगमा एक युवकले फेरी रुकुम घ/टना झै या’त’ना पाएका छन् । युवकलाई या’त/ना दिएको देख्न नसकेर उनको प्रेमिकाले संसार छोडेकी छन् युवकलाई आफ्ना परिवारले या’त’ना दिएपछि प्रेमिकाले संसार छोडेकी हुन् । घटना भएको भोलीपल्ट उनले जिवन त्या/गीन् ।
यो घ/टना अछाम रामारोशन २ मा यस्तो घ/टना भएको हो । युवक अहिले घाइते अवस्थामा छन् । उनी राम्रोसंग बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा छन् । तर यिनीहरु सानै उमेरका हुन् । युवक अहिले १७ वर्षका भए भने युवती १५ वर्षकी थिइन् । युवक अहिले घरमै बसेका छन् । उपचार गर्ने पैसा नभएकाले उनी घरमै बसेको युवकको आमाले बताएकी छन् ।